Pochettino oo ammaan kala dul dhacay ciyaartoydiisa kaddib taariikhdii cajiibka ahayd ay xalay ku hor sameeyeen Man City – Gool FM
Pochettino oo ammaan kala dul dhacay ciyaartoydiisa kaddib taariikhdii cajiibka ahayd ay xalay ku hor sameeyeen Man City
(Yurub) 18 Abriil 2019. Macalinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay, kaddib markii ay kaga soo gudbeen Manchester City wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League.
Kooxda Manchester City ayaa si fool xuma ah kaga hartay tartanka Champions League wallow ay ku adkaadeen kulnkan 4-3, hadana Tottenham ayaa ku soo baxday goolal badsi oo kulamada banaanka ah waxayna wadarta natiijada labada kulan ay noqotay 4-4.
Hadaba Mauricio Pochettino ayaa ciyaarta kadib si weyn ugu amaanay ciyaartoyda kooxdiisa Tottenham shaqadii adkeyd ay kulankan ka qabteen wuxuuna yiri:
“Ciyaartoyda kooxdeyda waa geesiyaasha maanta, aad ayaan ugu faraxsanahay taageereyaasheena garab istaagooda inta ay ciyaarta socotay, waana sababta aan u jeclahay kubadda cagta”.
“Sida ay ciyaarta ku dhammaatay waa mid aan la rumeysan karin, aad ayaan ugu faanayaa ciyaartoydeyda, waxay shaqsiyad weyn ku dhex muujiyeen gudaha garoonka, waana u qalanay inaan u soo baxno wareega xiga ee tartankan”.
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii kooxda Liverpool ay xalay reebtay FC Porto oo ay ugu soo baxday afar dhammaadka Champions League
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii waallida ahaa ee xalay dhex-maray kooxaha Manchester City iyo Tottenham